သတင်း - Powder metallurgy sintering နည်းလမ်းကဘာလဲ
အမှုန့်သတ္တုဗေဒအမှုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း နှင့် ပြုပြင်ခြင်း လွန်ကဲခြင်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကာ sintering သည် အမှုန့်သတ္တုဗေဒ၏ အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။sintering လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အမှုန်အမွှားများသည် စီးဆင်းခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း၊ အရည်ပျော်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပုံသွင်းခြင်း နှင့် အခြားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ရမည်။လုပ်ငန်းစဉ်သည် အမှုန့်ကို ပိုမို ခိုင်မာစေပြီး ၎င်း၏ ချွေးပေါက်အချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးသည်။အမှုန့်သတ္တုဗေဒ sintering အတွက် sintering နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ဒီတော့ အသုံးများတာက ဘာလဲ။sintering နည်းလမ်းများအမှုန့်သတ္တုဗေဒအတွက်?
Powder metallurgy sintering method သည် များသောအားဖြင့် အောက်ပါအမျိုးအစားများ တွင်ပါဝင်သည် ။
1. အရည်အဆင့် sintering
အမှုန့်ကျစ်လစ်မှုတွင် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ရှိနေပါက၊ အချို့သောအစိတ်အပိုင်း၏ အရည်ပျော်မှတ်အထက်တွင် sintering ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သန့်စင်နေစဉ်အတွင်း အမှုန့်ကျစ်လျစ်သော အရည်ပမာဏအနည်းငယ်ပေါ်လာသည်။
2. ဖိအား sintering
သန့်စင်နေစဉ်အတွင်း ၎င်း၏သိပ်သည်းဆကိုမြှင့်တင်ရန် အမှုန့်ကိုယ်ထည်သို့ ဖိအားသက်ရောက်သည်။Pressure sintering သည် တခါတရံတွင် ထုတ်ကုန်များကို တိုက်ရိုက်ရရှိရန် အမှုန့်များဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် sintering ပေါင်းစပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် ပူပြင်းသောဖိခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်တူသည်။
3. အသက်သွင်းခြင်း sintering
အချို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဓာတုအစီအစဥ်များကို sintering လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လက်ခံကျင့်သုံးသည်၊ ထို့ကြောင့် sintering temperature သည် အလွန်လျော့ကျသွားသည်၊ sintering time သည် သိသာထင်ရှားစွာ တိုသွားသည်၊ နှင့် sintered body ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပြီး မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
အမှုန့်ကိုယ်ထည်ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ဖိသောအခါ၊ sintering ပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှုန့်အမှုန်များကြားတွင် arc ထုတ်ပေးရန်အတွက် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးနှင့် သွေးခုန်နှုန်း လျှပ်စစ်ကို အသုံးချသည်။sintering လုပ်နေစဉ်အတွင်း၊ ဖိအားသည် workpiece သို့တဖြည်းဖြည်းချင်းသက်ရောက်သည်၊ နှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် sintering လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားသည်။
5. အမှုန့်အစိုင်အခဲအဆင့် sintering
အမှုန့်ကြိတ်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြည်မှုန့် သို့မဟုတ် ကျစ်လစ်သောအမှုန့်များသည် sintering လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အရည်ပျော်ခြင်းမရှိပါ။Powder solid-phase sintering ကို အစိတ်အပိုင်း အရေအတွက်အရ ယူနစ်စနစ် အစိုင်အခဲ-အဆင့် sintering နှင့် multi-system solid-phase sintering ဟူ၍ နှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။
အထက်ပါအချက်သည် အမှုန့်သတ္တုဗေဒ၏ သာမာန် sintering နည်းလမ်းများအကြောင်း နိဒါန်းဖြစ်သည်။Powder metallurgy sintering သည် ခွန်အားနှင့် အခြားဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကျစ်လစ်သော သို့မဟုတ် ဖြည်မှုန့်ကောင်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အပူချိန်မြင့်သည့် ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ Minxin Powder Metallugy သည် သတ္တုအမှုန့်နှိပ်ခြင်းနှင့် သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သုတေသနနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းတို့ကို ကတိပြုခဲ့သည်။အမှုန့်ဆေးထိုးခြင်း.ဆယ်နှစ်ကြာအောင် R&D အဖွဲ့သည် တိကျမှုမြင့်မားသော အမှုန့်သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ဆီ-ထုံကျဉ်ထားသော ဝက်ဝံများ၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဂီယာများ၊ သံမဏိမှုန့်သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အမျိုးမျိုးသော အမှုန့်ဆေးထိုးခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရန် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ပစ္စည်း- ကြေးနီစီးရီး၊ ကြေးနီသံစီးရီး၊ သံစီးရီး၊ အလွိုင်းသံမဏိ၊ သံမဏိကြွေထည်ပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့။